Ciyaraha - Scroll to Top Jowhar.com-Somali News Leader
Category Archives: Ciyaraha Edin Dzeko oo qarkana u saaran inuu garoomada ku soo laabto Tababaraha Man City Manuel Pellegrini ayaa rajo weyn ka qaba in weeraryahankiisa Edin Dzeko uu toddobaadka soo socda garoomada ku soo laabto kadib markii uu ka soo kabtay dhaawac ka gaaray bowdada. ...
Ciyaaryahan Lionel Messi oo laga yaabo inuu u wareego kooxda Chelsea Ciyaaryahanka Barcelona Lionel Messi ayaa khilaaf dhinaca maaliyada ah waxa uu kala dhexeeyaa kooxdiisa waxaana uu ka fiirsanayaa in u wareego Chelsea. ...
Pele oo la dhigay qeybta degdegga ah ee isbitaalka Albert Einstein magaalada Sao Paolo Ruugcadaagii ciyaaraha kubbada cagta caalamka Pele ayaa la dhigay isbitaal ku yaal magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil kadib markii xaaladiisa caafimaad ay xumaatay. ...
Messi oo noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan Horyaalka Spain ee La Liga Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa noqday ninka ugu goolal dhaliska badan Horyaalka Spain, kadib markii uu jebiyay rikoorkii uu heystay ciyaaryahan Telmo Zara, waxaana Messi uu kooxdiisa ka caawiyay guul weyn oo ay xalay ka gaareen kooxda Sevila. ...
Chelsea oo hogaanka sii dheereysatay,Man United oo guul gaartay iyo Man City oo lagu dhegay (Sawiro) Ciyaaro xiiso leh ayaa maanta waxa ay dhex mareen qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee hoyaalka Ingriiska iyadoo kooxaha Chelsea iyo ManUnited ay guulo gaareen. ...
Lionel Messi oo bar bareeyay rikoorka goolasha ee Champions League uu heystay Raul, kana hormaray Ronaldo Xidiga reer Argentine iyo kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa bar bareeyay rikoorka goolasha ee Koobka Champions League uu dhaliyay halyeygii hore ee Real Madrid Raul Gonzalez, kadib markii uu xalay dhaliyay labo gool. ...
Juventus oo ku soo laabatay hogaanka Seria A-da, kadib markii laga badiyay Roma Kooxda Juventus ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Empoli, kadib markii 2-0 ay uga badisay, iyadoo Juve ka soo kabatay guuldaradii todobaadkii hore ka soo gaartay kooxda Genoa.
Goolasha Juventus ayaa dhashay qeybtii labaad ciyaarta, waxaana ay 11-daqiiqo gudahood ku heleen labo gool oo deg deg ahaa.
Andrea Pirlo ayaa daqiiqadii 61aad u dhaliyay goolka koowaad, waxaana... Real Madrid oo hogaanka u qabatay Horyaalka Spain ee La Liga, kadib markii ay ka badisay Granada (Sawirro) Kooxda Real Madrid ayaa wali sii wadata guulaheeda xiriirka ahaa, iyadoo markan si rasmi ula wareegtay hogaanka Horyaalka Spain ee La Liga, kadib markii ay 4-0 uga badisay kooxda Granada. ...
Chelsea oo ka badisay kooxda QPR, Arsenal oo guulaheeda sii wadata iyo Liverpool oo la garaacay (Sawirro) Kooxda Chelsea ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda QPR, iyadoo wali sii heysa hogaanka Horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, iyadoo ku hogaamineysa 26-dhibcood, ...
Liiska 23-ka Ciyaaryahan ee u sharaxan abaal marinta xidiga Aduunka ee FIFA Ballon d’Or oo la soo saaray Waxaa la soo saaray liiska 23-ka ciyaaryahan ee u sharaxan ciyaaryahanka Aduunka ugu wanaagsan ee FIFA Ballon d’Or ayaa la soo saaray, iyadoo mar kale ay ka soo muuqdeen musharaxiintan ciyaaryahanada sida aadka ah u xafiiltama ee Ronaldo iyo Messi ...
- 26809 views Daawo Sawirada Qaraxyadii ismiidaaminta ee maanta ka dhacay wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye
- 23953 views Daawo Sawirada Kulankii Golaha Wasiirada iyo war saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha
- 21364 views Al-Shabaab oo xaqiijiyay geerida Axmed Godane, kuna dhawaaqay Hogaan cusub
- 20109 views Indha Cadde “Ninkaan la magacaabay waxay qaraabo yihiin Axmed Godane”
- 19531 views Maxaa ka soo baxay kulamadii Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ay la yeesheen xubnaha Beesha Caalamka ?
- 18229 views Maxaa ka socda Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ?
- 17295 views Popular
Kulanka Baarlamaanka oo maalinta berri lagu wado inuu dib u furmo iyo mooshinka oo mar kale la keenayo
Kooxda IS oo gowracday wariyihii labaad ee Mareykan ah Steven Sotloff